ဝါသနာအရဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာပါတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဝါသနာအရဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာပါတဲ့
Posted by ေရႊ ၾကည္ on Aug 17, 2012 in Arts & Humanities | 39 comments
ရွှေကြည်တို့ အသိအစ်မတယေက်ကမြင်းခြံကသူ့ဦးလေးရဲ့ ဝါသနာအလျောက်ပြုလုပ်ထားတဲ့
ရွံ့ ရုပ်လေးတွေကိုဒါ့ပုံရိုက်ပြီးလာပြပါတယ်။ သူ့ဦးလေးကအနေအေးလွန်းပြီး ဆိုင်တွေကတင်ရောင်းဖို့ကမ်းလှမ်းတာကို
ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေရတာကတော့ အဲ့ဒီအသိအစ်မပေါ့။ သူက သူ့ဦးလေးလက်ရာကိုသူများတွေ
ခံစားဝေဖန် အသိအမှတ်ပြုတာလိုချင်ရှာတယ်။ ရွှေကြည်ကလည်းတော်လိုက်တာလို့ပြောနိုင်တာကလွဲပြီးမသိ။
အဲဒီတော့ အခုလိုပို့စ်တခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ခံစားကြည့်ပေးကြပါဦး ရွာသူားတို့ရှင့်။
လက်လုပ် ရွံ့ ရုပ်လေးတွေပါ။ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါတယ်တဲ့။ အစ်မက ဖေ့ဘွတ် မှာလည်းတင်ထားပါတယ်။
အဲဒါကို အခြေခံပြီး ကြွေရုပ်အဖြစ်
ငယ်တုန်းက ဆရာကောင်းဆီမှာ သေချာသင်ခဲ့ဖူးတယ် မှတ်တယ်
လက်ရာတွေက တစ်ကယ်ကောင်းတယ် ၊ အနုပညာစိတ်ကူးစိတ်သန်းလဲ ကောင်းတယ်ဗျို ့။
ဘာသင်တန်းမှ မတက်ဘဲ အခုလို အသက်ဝင်တဲ့ လက်ရာကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ တကယ့်ပါရမီရှင် လို ့ပြောချင်ပါ တယ်။ ကိုငှက် ပုံကိုဖန်တီးထားတာကြိုက်ပါတယ်။ မစ်စတာ ဂစ်တာမှာ ကာရေကေချာပုံတွေဆွဲတဲ့ ပန်းချီ ဆရာလိုဘဲ ပုံတူအပ်ချင်တဲ့ လူတွေကို ဖန်တီးပေးရင် ဝင်ငွေ သိပ်ကောင်းမဲ့အစီအစဉ်လို ့ထင်မိပါတယ်။
အဲဒီ ဦးလေးနဲ ့သာတွေ ့ရရင်တော ့ကိုယ့်ပုံတူလေး တစ်ပုံလောက် ရွှံ ့လေးနဲ ့အမှတ်တရ လုပ်ပေးဖို့ပြောမိ မှာဘဲ။ မြင်းခြံဘက်ရောက်ရင် အဲဒီဦးလေးရှာရအောင် နာမည်နဲ့လိပ်စာပေး ပေးနိုင်မလားဟင်။
တော်လိုက်တာနော်…. ပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ဦးလေးကို နားချကြည့်ပါဦး….
ဟုတ်ပမမွန်မွန်ရေ နှမြောစရာနော်။ ရွက်ပုန်းသီးခေါ်ရမလားပဲ။
P chogyi ရေ ဟုတ်တယ်နော် ကြွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။
အူးပေ သေချာတော့မသိဘူးရယ် သူ့တူမဆီကပဲသိရတာဆိုတော့။ စိတ်ကူးကောင်းတယ်နော်။
ကာယကံရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်ခွင့်တောင်းထားတာမဟုတ်လို့ လိပ်စာတော့ မပေးနိုင်သေးပါဘူး။
ကောင်းပါတယ် ဗျာ… ကြည့် လို့ ရှု လို့
တကယ် ကို တော်တဲ့ ပါရမီ ရှင်ပါဗျာ ! ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းသဘောမျိုး မလုပ်ချင်ပုံရှိပါတယ် ။ ဝါသနာ နဲ့ ခံစားမှု အတွက်ပဲ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှု တခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ချင်တဲ့ အင်မတန် အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တဲ့ အနုပညာသမား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ မြင်းခြံ ရောက်လို့ ကြုံရင် သွားကြည့်ချင်သေးတယ်ဗျာ !
ကိုရဲရင့်လှိုင် လိပ်စာပေးလို့ရမယ်ဆိုရင် အကြောင်းပြန်ပေးမယ်နော်။ တခြားအရုပ်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ ! လိပ်စာ လေး ကြိုသိထားရရင် တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာ ! ကျေးကျေးပါဗျာ !
ကွန်နက်ရှင်ကလည်း ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ အောက်ဆုံးပုံကို ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ ခုထိမမြင်ရသေးဘူး။ အတော်ကောင်းတဲ့လက်ရာတွေပါ။ အနုပညာရှင်အစစ်အမှန်တွေက သူတို့လက်ရာတွေကို သူများကို အများအားဖြင့် ပေးရမှာနှမြောတယ်။
international ဖြစ်တယ်….. လုပ်ထားတဲ့ ဟာတွေက……
တကယ် ကို အဆင့်မြင့်ပါတယ်…….
အိုး..တော်လိုက်တာ …ရုပ်တုတွေက တကယ် .. လက်ရာမြောက်ပါတယ် ။
ဒီလို…မထင်မရှား..အနုပညာရှင်တွေ..ဆီက ပုန်းလျှိုး ကွယ်..ဝှက်..ထွက်လာတဲ ့
အနုပညာ လက်ရာ တွေကိုလည်း.. ရှာဖွေ.ဖော်ထုတ်ပြီး….
အပေါ်က စ ကြည့်ရင်… ဒုတိယ ရုပ်တုကို အရမ်းသဘောကျတယ် ။
အဲဒီလို ရုပ်တုမျိုး… ဖန်တီး တတ်ချင်လိုက်တာဗျာ..။
အခုလို… ပြန်လည် တင်ပြပေးလို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.။
ကိုငှက်ပုံရယ်၊သူ ့ပုံရယ် လှပါဘိ
မ မနော ရေသူလည်းနှမြောတာနေမှာ။ ကျေးဇူးပါနော်အစ်မ။
အလင်းဆက်ရေ ဟုတ်တယ်အစ်မလည်းအဲလိုလေးတွေးမိလို့ ချပြကြည့်တာ။ အစ်မလည်းသိပ်မသိလို့လေ။
ကိုနာဂရရေ ပြန်ပြောပြလိုုက်မယ်နော်။ ကျေးကျေး။
မရောင်းချင်တောင် ပြပွဲလေးလုပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
လောကနတ် ဆိုရင် သိပ်ကြေးမကြီးလောက်ဘူး။
Studio 65 မှာ ပြပွဲ လုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိထားတယ် … တီတီ padonmar ရေ …။
ပွဲလုပ်ဖြစ်မယ် ဆိုရင် sponsor လိုတယ်ဆိုရင် .. လဲ ကူညီ ပေးလို့ ရပါကြောင်း ….။
ကိုဌက်ကြီး ပုံတော့သဘောကျသွားပြီ၊ လက်ရာမြောက်ပ။
ဖြစ်နိုင်ရင် (တကယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်) ကျွန်တော် က အဲ့လို ပစ္စည်းတွေ စုရဆောင်းရ ရာဇဝင် လိုက်ရတာ မျိုး ကို တော်တော် ဝါသနာ ထုံပါတယ်။ အမှတ်တရ .. ပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဖြစ်နိုင်သလောက် လေး လိုချင်လိုက်တာဗျာ …
သေချာ သိမ်းပါ့မယ် ဆိုတာ ကတိ ပေးပါတယ် ….
ဝမ်းသာစရာပဲ ဒီလို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိတာ ။ တကယ်လက်ရာမြောက်တဲ့ပုံတွေပါ။ ပါရမီပါပုံ ရပါတယ်။
မပဒုမ္မာရေ အကြံကောင်းလေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ပြောပြလိုက်ပါမယ်။
လေးခင်ခ ကိုငှက်ပုံကလေ ဆံပင်တောင်နည်းနည်းပြုတ်နေတယ်။ ကြာပြီထင်ပါ့။ ကျေးဇူးပါ။
ကို လုင်အဲဒီအစ်မကသူ့ဦးလေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ သူအရမ်းလည်းပီတိဖြစ်နေတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
ရွှံ့နဲ့ လုပ်တာလားဗျ …
မိုက်တယ်ဗျာ .. အရမ်းဘဲ ..
ဟုတ်ပ မောင်လေးအံစာရေ ရွှံ့နဲ့လုပ်တာပါတဲ့။ ကျေးဇူးပါ အသည်းကွဲသမားကြီးရှင့်။
အနုပညာကို ခံစားတတ်ပါတယ်ဗျာ .. လို့ ..
ကြောင်ရုပ်တရုပ်လောက် ထုခိုင်းလိုက်ဗျာ.. ဒါဆို အင်လား တကယ်လား သိသွားကြမယ်.. နိုင်ငံတကာ ပန်းပု ပန်းဆစ်ကျောင်းတွေမှာ ကြောင်ပုံအတူဆုံးထုနိုင်မှ ဆရာအဆင့်သတ်မှတ်တယ်…။
မိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုချစ်ပြီးဦးထိပ်ထားပေမယ့် အမေ့ကိုပိုလို့ချစ်တဲ့ ရွှေကြည်။…. နောက်နောင် ဦးကြောင်ရှေ့မှာ အဲသလို မပြောရဘူးနော်….ဦးကြောင်ကလွဲရင် ကျန်အားလုံး ဖွဲနဲ့စကွဲဖြစ်နေမှ ကြိုက်တာ…။ ဦးကြောင်လည်း ရွှေကြည်ကလွဲ ကျန်တာအားလုံး မုန့်လုံးရေပေါ်နဲ့ မုန့်စိမ်းပေါင်းပဲ…………..
အမေနဲ့တော့မယှဉ်နဲ့ဦးကြောင်ရေ လုံးဝမရဘူးနော် အမေထိဓါးကြည့်ဆိုတဲ့ရွှေကြည်ပါ။
နှမြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျ….။ ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းခံစားနေတယ်။ အခြားလူတွေကို ချပြခံစားခွင့်ပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
မရွှေကြည်ရယ် … လက်ရာတော်တော်မြောက်တာပဲ .. တကယ့်ကိုပါရမီရှင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် … ။
ဒီလိုဟာမျိုး ဟိုတယ်တွေမှာ အလှဆင်ဖို့နဲ့ … နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ.. စိတ်ဝင်စားကြတယ် ။
ပြပွဲလေးတစ်ခုလောက်လုပ်ပြပြီး … မီဒီယာကို မိတ်ဆက်လိုက်လျှင် .. နောက်ပိုင်း အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းတွေ ပေါ်ချင်ပေါ်လာမှာပေါ့ ။
ဟိုးတလောက The Strand Hotel မှာ လုပ်တဲ့ ပန်းချီပြခန်း တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တယ် …… .မော်ဒန် အနုပညာဆိုလားဘာလား … စက်ဘီး ဘီးကြီးကို ဆေးသုတ်ပြီး … ပန်းချီကားပေါ် လှည့်ထားသလို ဒီဇိုင်းမျိုးကို … ဒေါ်လာ 2000နဲ့ ယူရိုပီယန် တစ်ယောက်ဝယ်သွားတာ အံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ် … ကျွန်မအတွက်တော့ … (မခံစားတတ်လို့လားမသိဘူး ) ဒီဒီဇိုင်းပေါ် ဒီလောက်တန်မယ်လို့ကို မထင်တာ … (ကိုယ့်အတွေးပါ ) … ။ ကျွန်မကို 2000 မပေးနဲ့ 20ပဲပေးလို့ ရောင်းလျှင်တောင် ဝယ်ဖို့စိတ်ကူး လုံးဝမရှိတဲ့ .. ခံစားမှုမျိုးပါ .. (ဖန်တီးသူကိုတော့ အားနာပါတယ် …ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှ မကြိုက်တာ) ။ တကယ်တော့ … ဝယ်တဲ့လူကလည်း အရမ်းကို သဘောကျပြီး ဝယ်သွားခဲ့တယ် …. ။
အရည်ချင်းရှိပါလျှက် တိမ်မြုပ်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးဆို …..ဘယ်လောက်များ နစ်နာလိုက်မလဲ … ။ ဒီလို လက်မှုပညာတွေ မတိမ်ကောခင် ၊ ပြပွဲလေးလုပ်ပြီး … အများရှေ့ထုတ်ပြသင့်တယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ … ။
ဟုတ်ပ မအိတုံရေ ရွှေကြည်လည်းမအိတုံလိုတခါတလေဖြစ်ဖူးတယ် လုံးဝခံစားလို့မရတာမျိုးလေ။
ရွေကြည်နှုတ်ဆက်ဝင်လာသံကြားလို့.. စာဟောင်းတွေလိုက်ကြည့်တာ.. အဲဒီထဲကစိတ်ဝင်စားစရာလေးတခုပါ…
ရွံ့ကို ကြာရှည်ခံဆေးတမျိုးမျိုးသာမှုတ်လိုက်ရင်.. တော်တော်အဆင်ပြေမှာပဲလို့..
သူကြီးရေ သူလည်းအဲ့လိုတော့ပြောတာပဲ ဒါပေမယ့် နည်းပညာလိုမယ်ထင်တာပဲ
ကျောက်ဖြူသားဆိုမလား စကျင်ကျောက်ဆိုမလား မျိုးနဲ့ ထုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အတော်အဖိုးတန်မှာဗျား
အဲ အဲဒါကျတော့ မတူတော့ဘူးထင်တယ် သူစိတ်မဝင်စားလောက်ဘူးဗျ အဲဒါက ပန်းပုခေါ်မလား ဒါရွံ့ရုပ်ကကျတော့ဘာခေါ်မတုန်း သိတော့ဘူး ဖန်တီးတာခြင်းတော့မတူဘူးဗျ သူကရွံ့သားကို ပုံဖေါ်ရတာကိုသဘောကျပုံပဲ
မျက်စေ့ရှန်းနေလို့မနေ ့ညကမှ ဖတ်ရတာပါ…
ဒီနေ ့တော့ ဝင်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကော်မန် ့ရေးဖြစ်ပါတယ်..။
ဆရာကြီးလုပ်ပြီး ဝေဖန်တာတော့ မဟုတ်ပါ..အကြံလည်းပေးရင် ကူညီရင်း ချီးကျူးချင်လို ့ပါ…။
ကိုငှက်ပုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ထု ပုံတူကို ပိုကြိုက်ပါတယ်..။
ဒုတိယမြောက်ပုံက မူရင်းနိုင်ငံခြားပန်းပုရှိပါတယ်..။ လေ့ကျင့်ချိန်မှာတော့ ကျနော်တို ့လည်း အတုယူရပါတယ်.. ဟိုမူရင်းက စကျင်ကျောက်ပါ.. သူက ရွှံ ့နဲ ့ထုထားတာပါ..အဲဒီပုံမှာ ညာဘက်လက်ကျိုးထားလို ့ဆင်ကော်နဲ ့ပြန်ဆက်ထားတာ တွေ ့ပါတယ်..။
အဲဒါကိုလည်း ဒီက နည်းစနစ်တချို ့နဲ ့သာသူကြိုးစားကြည့်မယ်ဆို အကုန် အဆင်ပြေပါတယ်..။
နောက်တခုက figure ပိုင်း မာဆယ်ပိုင်းလေးတွေ သူ လက်ရည်ထပ်သွေးချင်သေးလို့မထုတ်ပြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
ကျနော် ကူညီချင်ပါတယ်.. နည်းပညာ နည်းစနစ် ပုံတွေ ကအစပေါ့..။
သူ အီးမေးလ် သုံးတယ် ဆိုရင်လည်း လိုချင်ပါတယ်..။
မြင်းခြံမှာ နေတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်နှစ် ကျနော် ပြန်ဖြစ်ရင် ကိုယ်တိုင်သွားတွေ ့ချင်ပါတယ်..။
နောက်ထပ်ပုံတွေလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်.. ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်..။